विराटनगरकी उपमेयरले भनिन्- लैंगिक हिंसा निवारण मेरो प्राथमिकता || राजनीति समाचार
विराटनगरकी उपमेयरले भनिन्- लैंगिक हिंसा...
विराटनगरकी उपमेयरले भनिन्- लैंगिक हिंसा निवारण मेरो प्राथमिकता
विराटनगर महानगरकी उपमेयर विजेता शिल्पा निराला कार्कीले लैँगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएकी छन्। जनकपुरमा ०३५ सालमा जन्मिएकी शिल्पा विराटनगर महानगरलाई समृद्ध बनाउने भूमिकामा छन्।
स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिकाको उपमेयरतर्फ एमालेबाट विजयी कार्कीले जित हात पारेसँगै पदभार सम्हालेको दिनको सुरुआतमा उनले लैंगिक हिंसालाई प्राथमिकता दिएकी हुन्।
उनै कार्कीसँग देश सञ्चारका अभयकुमार राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
० तपाईंले पदभार ग्रहण गर्दा पहिलो सिफारिस लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना सुचारु गर्ने भन्नुभएको छ। के हो यो?
अहिलेको अवस्थामा हिंसापीडित महिला दिदीबहिनी रहनुभएको छ। जो आर्थिक रुपमा समेत कमजोर र चाहेर पनि हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने अवस्थामा हुनुहन्छ। हिंसामा पर्नुभएका महिलाका लागि अदालतसम्म पुग्ने क्रममा सिड मनि पनि नहुने हुँदा समस्या देखिएको छ।
भोलिका दिनमा त्यो अवस्था आउन नदिन कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखेर अघि बढेको हो। श्रीमान्को हिंसामा परेका महिलालाई खाना खान नपाएको अवस्थामा, खाना खुवाउने, अदालतमा खर्च जुटाउने वा जस्तो किसिमको आवश्यक्ता पर्छ, त्यस्तो खर्च कोषले व्यहोर्नेछ।
० यस कोषको कार्यविधि बने पनि परिषद्ले पास गर्न बाँकी नै छ। कोषमा रकम नराखी गरिएको सिफारिस हतारो भएन ?
– हो, कोषमा अहिले रकम राखिएको छैन। त्यो निर्णय भइसकेको छैन। भोलिका दिनमा समय परिस्थितिले के भन्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो। यति रकम तोकिएला त्यसले पुग्ला–नपुग्ला। बरु कोष खडा गरिएको छ, जहाँबाट भए पनि रकम जुटाएर, सहयोग मागेर अघि बढिनेछ। अहिले नै रकमको दायरा तोकिएको छैन।
० कोषको कार्यविधि ०७८ बनेको छ तर अब परिषद्ले पास नगरे के हुन्छ?
– महिलाको हक सुनिश्चित गर्न कोष स्थापना गरिएको हो। यसलाई धेरै ठूलो मुद्दा बनाइनु हुँदैन। महानगरमा हामीसँग जनप्रतिनिधिको मत बढी छ त्यसमा हामीलाई आवश्यक रहने अन्य जनप्रतिनिधिसँग मैले अनौपचारिक छलफल गरिसकेर निर्णय गरेकी हुँ। यसमा कहीँ–कतै बाधा अड्चन आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन।
० असार १० गते महानगरको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ, तपार्इं राजस्व पराशर्म समिति संयोजक, बजेट तर्जुमाको अहं भूमिकामा हुनुहुन्छ?
– बजेटको सन्दर्भमा अघिल्लो कार्यकालका पदाधिकारीले गर्नुभएको कामको अध्ययन गरिरहेकी छु। अहिले मैले महानगरको आर्थिक अवस्था थाहा पाउन जरुरी छ। बालबालिका, महिलासँगै सबै क्षेत्रले अपनत्व पाउने गरी सबैलाई समेटेर बजेट आउनेछ।
० पालिकामा दलहरूको मिश्रित रुपमा प्रतिनिधित्व छ। विगतमा जस्तो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको अवस्था होला कि नहोला?
– म पनि नितान्त सेवाका लागि महानगरपालिका गएकी हुँ। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ केही छैन। त्यसैगरी, मेरो पार्टीले पनि त्यहाँ राजनीतिक स्वार्थ जनाउने छैन। मलाई आशा छ मेयरबाट पनि त्यस्तो नहोला। हामी सबै मिलेर एकता भएर काम गर्नेछौँ। महानगरलाई अति आवश्यक हुँदा हेर्छौं, भर्ती केन्द्रका रूपमा चिनाउँदैनौँ। हामी गर्दैनौ त्यस्तो काम।
उपमेयर कार्कीले निर्वाचनमा गठबन्धनतर्फका उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवलाई ११ हजार बढी मतले पराजित गरेकी थिइन्। कार्कीले २५ हजार ६ सय ८० मत पाएकी छन्।